आखिरमा म पनि ऋतुजस्तै किन बन्न सकिनँ ? म आफ्नै लहरमा किन हिँड्न सकिनँ ? म निराश हुन्थेँ । मैले आफूलाई किन ढकमक फुलाएर राख्न सकिनँ ? म रित्तिँदै थिएँ दिनदिनै र पलपल । मानिस रित्तिँदा उसको भरिने दिन कहिल्यै आउँदैन किन ?